Hogaamiyaha ugu sareeya ISIS Abu Bakr Baghdadi oo la sumeeyay... - iftineducation.com
iftineducation.com – Hogaamiyaha ugu sareeya kooxda ISIS , Abu Bakr Baghdadi, ayaa la sumeeyay isaga iyo saddex saraakiisha kale ee kooxda Gobolka Nineweh ee waqooyiga galbeed Ciraaq sida , warbaahinta maxaliga laga soo xigtay Isniintii,.
“Waxaa jiray warbixino sirdoon in hoggaamiyaha ISIS Abu Bakr al-Baghdadi iyo saddex taliyaal sar sare ay cuneen cunta sumeeysan,.
Hogaamiyaha kooxda iyo kuwa kale ayaa la sheegay in si daran loo sumeeyay oo loo qaaday meel aan la garaneyn iyadoo ilaalo adag laga hayo.
Sida laga soo xigtay ilo ku, dhaw dhacdada ayaa ka dhacday koonfur-galbeed ee Mosul meel u dhow xadka Suuriya.
ISIS ayaa lagu soo waramayaa in ay ka bilaabeen degaanka olole ku aadan in la helo kuwa mas’uulka ka ah sumeenta cuntada taliyayaasha ‘.
dhaqdhaqaaqa Al-Baghdadi ayaa waxaa yaqaana oo kaliya kuwa aadka ugu dhaw, iyadoo hogaamiyaha si joogto u boos beddesho goobaha joogitaankiisa ee Ciraaq iyo Suuriya si ay uga badbaadaan weerarada cirka.